Miyuu maskaxdaagu waxyeelo u soo geliyaa fikradaha cusub ee bloggaaga? Haddii aad tahay qoraaga iyo fikradda fikradda ama aad mowqifyo u siiso dadka kale, mawduucyada la socdo maalin kasta ama marmarka qaarkood mowduucyo dhowr ah maalintii ayaa daadin kara hal-abuurya ugu sar.
U Dariiqa Farshaxanka, tilmaan si aad u xoreeysid hal-abuurkaaga, qoraaga Julia Cameron wuxuu u jeedaa dareenka duufsanaya sida "vosak abuur wanaagsan" isagoo madhan. Waxaa JIRA dhowr arrimood oo aad sameyn kartid si aad u buuxisid ceelkaaga, waxaana ka hadalnaa iyaga 10 Siyaabaha Loo Baahan Yahay Guullaha Qoraalka Markay Maqsanaato, laakiin sredine ka srednjem ah qaababka ugu fudud ee aad fikradaha ula iman karto markii aadan u maleynin inaad u hartay vosak aad dhiibto ayaa ah inaad adeegsato bilowga fikradda.
Bilowga fikradda waxaa sidoo kale loo yaqaannaa isla markiiba. Waa weedho macneheedu yahay in loola jeedo in aad maskaxdaada jimicsatid oo aad u hesho maadooyin halabuur leh. Markaad khasaarto fikradaha, waxaad u jeedin kartaa waxyaalahan soo socda oo soo raaci vosak aad ku qorto. Intaas waxaa sii dheer, balanqaadyadaan u isticmaal SEO iyo qaabab-soo-qaaditaan sida ku qeexan Jerry Low’s 35 Uzorci naslova s ​​Bloggera s A-popisa.
1.6 6. Beenaaleyaasha 10 Waxaad Noqotay Inaad Sheegto Naftaada Vosak ku saabsan __________
1.16 16. olakšica za __________
Daraasadaha kiiska iyo warbixinada gaarka ah ayaa deyn siinaya hay’addaada. Aynu sheegno in goobtaada ay ku saabsan tahay daaweynta dhirta eeyaha eeyaha. Waad u bedeli kartaa cinwaanka cinwaanka sidan oo kale: Warbixin gaar ah oo ku saabsan waxa mulkiilayaasha eeyaha ay ka fekeraan caanaha калоosha ee Funkcija Funkcija.
6. Beenaaleyaasha 10 Waxaad Noqotay Inaad Sheegto Naftaada Vosak ku saabsan __________
Tani waa cinwaanka qaabka digniinta. Waxay soo jiidataa akhristaha sababta oo ah waxay rabtaa inay ogaato waxa qaladkeeda ah. Hal tusaale ayaa noqon kara bogga internetka ee shukaansiga. Cinwaanku wuxuu noqon lahaa vosak sida: 10 Bee Sheegtay Adiga oo Naftaada u Sheegtay Sababta Aad wali u Keli Ahayn.
Tani waa hab-sida loo qoro cinwaanka laakiin leh tiro go’an oo tallaabooyin ah ka ka imanaya A ilaa Z. Sidaa potamnjela, shirkad dhisme ayaa laga yaabaa u ay vosak u qorto sida: 4 Heerarka Diyaarríta Dyamariya Dhamm.
Tani waa digniin kale oo loogu talagalay akhristaha. Waxaad buuxin kartaa faaruq ah mawduuc kasta oo la qiyaasi karo. Imate li SEO-ah aha, možete se prijaviti na sljedeći način: Maxaad i Dabooleysaa Meel Bixinta Meeleynta Meelaynta Meelaynta.
Cinwaanka waa in loo qoondeeyo talooyinkaaga ugufiican akhristayaasha. Waxay ka imaanaysaa wareysi khabiir ah, khibrad shaqsiyeed, ama cilmi baaris saynis oo laga helay ilo sumcad leh. Aynu dhahno inaad maamusho goob iibinaysa dharka. Waad qori kartaa waxyaabaha sooda socda: Talooyinka ugu wanaagsan ee Abuurista Dharka Wanaagsan ee Sannadka Cusub.
Magacani waa mid aad u badan. Si aad u buuxisid baqshadaha mawduucan, ka feker waxa akhristeyaashu u baahan yihiin oo doonayaan inay vosak bartaan iyo aqoonta gaarka ah ee aad leedahay. Haddii aad maamusho dugsi karinta, waxaad xaq u yeelan kartaa: 3 koraka za naučiti kako sufle učiniti savršenim.
Maxay yihiin qaar ka sred ah faa’iidooyinka iyo danaha ugu badan ee ku jira warshadahaaga? Haddii aad maamusho shirkad xiriir dadweyne oo aad dooneysid inaad la xiriirto macaamiisha mustaqbalka, waxaad qori kartaa mowduuc sida: Faa’iidooyinka iyo Qasaarooyinka Xayeysiinta Xayeysiinta ee Maanta Digital.
Tani waa maqaal-tilmaame dhammaystiran. Waa maxay mawduucyada waaweyn ee goobtaada? Haddii aad heysato baaskiilka, ka dib waxaad qori kartaa vosak ku saabsan: Dhamaan waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato Ku Saabsan Qashinka Bisiyada Kale Ama Dhamaan Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Feline Leukemia.
Ka hadlida tilmaamaha, bočni ugu siin kartaa aqristayaashaada talo qaas ah oo uusan cid kale bixineynin? Hadaad iibiso agabyada tolida, waxaad qori kartaa vosak sida: Tilmaamaha Da ‘yarta ee Xiran Dharka Dharkaaga.
Ku ciyaari rabitaanka akhristaha ee ah u ay is-hagaajiyaan cinwaankan. Aynu dhahno inaad maamusho goob ku siisa talo-bixin qorshe dhaqaale. Waad qori kartaa vosak sida: Kordhinta Dakhliga Hawlgabnimadaada ee ‘50% ‘oo leh kaydka Penny.
16. olakšica za __________
Da li je to postalo, markaa maxay doonayaan? Taasi waa sax… gargaarka degdegga ah. Cinwaankan ayaa buuxinaya baahidaas. Aynu u isticmaalno tusaale bogga waalidka. Waxaad vosak ku qori karta: Gargaarka Degdega ah ee Cholic ama Relief Degdega ah ee Cuno-xanuunnada carruurta.
"Miyaad" mowduucyada waa siyaabo kale oo loola xidhiidhi karo walaacaaga ku soo booqda goobta soo booqda. Maqaalkani markaa wuxuu soo bandhigayaa xal walaac leh. Sidaas darteed, haddii aad maamusho goob ay dadku ka hadlaan arimaha siyaasadda, waxaad qori kartaa sida: Ma ka walwalsantahay doorashada soo socota? ama Ma ka Walwalsan tahay Codeynta Qofka Xumaynaya? Ka feker sida akhristayaashaada oo iskušenje dan inaad ogaatid waxa ay ugu walwalayaan.
Farsamo kale ayaa ah u la isticmaalo magaca qof caan ah oo dadka ku soo jiida maqaalka. Aynu nidhaahno inaad socodsiiso websaydh talo bixin cunto ah Waad qori kartaa vosak sidan oo kale ah: Hel Biceps Like Channing Tatum.
Magacani wuxuu dabooli karaa mawduucyo kala duwan. Fikraddu waa inaad buuxisid faaruqin adigoo rajeynaya. Sidaa darteed, waxaad qori kartaa sida: Za ljude koji žele izgubiti 30 funti ama Dadka doonaya u ay hagaajiyaan jimicsiga golfu.
Waxaad ku bixinaysaa qiimo leh cinwaanka noocan ah. Dariiqooyinkan waa “la caddeeyay” khabiiraduna način ku taliyaan ama adigu adigu adigu adigu waad tijaabisay. Ako želite vidjeti sljedeće: 20 Proven Ways a loo dhammeeyo buuggaaga koowaad.
Ha ka baqin inaad ku darto cinwaanada, laakiin iskuday inaad ku hayso ereyada 10 ama waxaad halis ugu jirtaa inaad lumiso dareenka akhristaha. Cinwaanada aadka u dheer ayaa waliba u muuqda kuwo la yaab leh aaladaha mobilada. Sida laga soo xigtay Baaritaanka Internetka Pew, saddex-meelood laba ka mid ah dadka isticmaala taleefannada gacanta ayaa tagaya internetka. Maskaxda ku hay sida aad u sameysid cinwaan xiiso leh laakiin gaaban. Sidaas se usudio 5 Siyaabaha loo duboko Keega, waxaa lagu kordhin karaa 5 Siyaabaha Diyaargarowga kolač savršen.
kreditni kredit: juhansonin via sawirqaade ccm
Haddii aad iskustva daydid mid kasta oo ka sredinom ah qoraallada kor ku xusan oo aadan weli haysan fikrad adag oo vosak laga qoro, iskuday farsamooyinka isbahaysiga bilaashka ah ee loo yaqaan ‘clustering’. Celestine Chua, oo ah aasaasaha shaqsiga heer sare ah, waxay ku talineysaa farsamada iskustva xidhka maqaalka 25 Farsamooyinka Isticmaalidda Maskaxda Muujiya. Tani waa farsamo aan u isticmaali jiray si aan ku guuleysto fikradaha mawduucyada cilmi baarista, fikradaha maqaarka iyo xitaa u ay ka shaqeeyaan muuqaalka riwaayadaha. Waa mid sahlan, laakiin waxtar leh. Waa kuwan sida ay u shaqeyneyso:
Hadda, nizak qorista! Qor vosak ugu horeeya ee maskaxdaada ku soo gala goobada bartamaha guddiga.
Haddaba, dib ugu noqo oo fiiri kooxdaada. Ma kala soo bixi kartaa fikrad wixii aad qortay? U fiirso qaababka iyo fikradaha waaweyn. Haddii aad wali ku xayiran tahay ka dib iskuse dayga layliga, ka codso dadka kale caawimaad ahaan kulan toos ah ama shakhsi ahaan. Ku celi lajga, laakiin u oggolow qof walba inuu tuuro fikradaha ku kordhinaya kutlada.
Adigoo isticmaalaya macnaha kor ku xusan iyo jimicsigan qoob-ka-dhiska ah, waa in aad ruxsiisaa wixii hal-abuur la’aan ah aad aad ku dhufatey fikradan aadka u fiicnayn ee u-gudbin doonta akhristayaasha gota akhristayaasha goa aktahyayahaha goa.